Izvi ndizvo zviri kutaurwa nevanhu nezve coil chitubu chematuru | Rayson
Izvi ndizvo zviri kutaurwa nevanhu nezve coil chitubu chematuru
Dhipatimendi remoto rinonakidza rinogamuchira vashanyi kuti vashanyire mabhuru emwenje, asi hapana vimbiso yekuti vashandi vari pabasa vachavaregedza; Kana vakuru vakuru vasipo, vashanyi vanokurudzirwa kutarisa nepahwindo. Musi waDecember 6, chinyorwa cheManich akataura nezve bulb
Ini ndakashandisa iyo 8 10mm counter yekuisa iyo Speakerti akacheka aya maseketa kusvika 6mm kudzivirira chero kukuvara kweiyo mbichana. Ini ndinoisa zviyero muhomwe yepurasitiki saka ini ndakakunda here? Dzokorora zvaunoita kana uchinamatira kune repamberi pepa nejira rekuseri, ita shuwa mahwendefa emberi akasungirirwa nehuni chaiyo, uye ita chokwadi chekumberi uye epamberi pemahara.